आखिर,शिव भगवानका लागि साउन किन प्रिय ? यो महिनामा मागेका सबै कुरा पुरा हुन्छन्
बुधबार ६ साउन, २०७८
काठमाडौं । साउन महिना भगवान शिवका लागि खाश हुन्छ । यो वर्ष साउन महिनाको पहिलो तिथि अर्थात प्रतिपदा तिथी १० साउनमा परेको छ । साउने मास पनि १० गतेदेखि नै शुरु हुँदैछ । साउन र शिव भगवानको गहिरो सम्बन्ध रहेको छ ।
साउन महिना सुन्नेवित्तिकै हाम्रो आँखामा मुसलधारे पानी र पानीमा गरिने भगवान शिव को भक्तिको दृश्य आउछ । तर कहिल्लै सोच्नु भएको छ कि भगवान भोलेनाथका लागि सबै महिनाहरुमा आखिर साउन महिना नै किन प्यारो लाग्छ ? भोलेनाथको लागि साउन महीनामा भक्तजनहरु किन धेरै आराध्य गर्ने गर्छन ।
साउनमा भगवान शिवलाई यत्ति धेरै महत्व दिनुको कारण के छ भनेर कहिल्लै सोच्नु भएको छ ? भगवान भोलेनाथ र साउन महिनाबीच धेरै सम्बन्धहरु रहेका छन् । आज हामी त्यस्ता केही कुराहरुबारे जानकारी गराउन गइरहेका छौँ ।
पार्वतीले शिव प्राप्त गर्न साउन महिनामा कडा व्रत बसिन्
पहिलो कथा अनुसार माता सती अर्थात पार्वतीसँग सम्बन्धित छ । माता सतीले आफ्नो शरीर योगको शक्तिसँगै आफ्नो बुबा दक्षको घरमा छोडिदिइन् ।
त्यसपछि उनले हिमालयमा पार्वतीको रूपमा जन्म लिइन् । भोलेनाथलाई श्रीमान्का रुपमा पाउनका लागि पार्वतीजीले धेरै गाह्रो व्रत राखेकी थिइन् । त्यस समयमा एक पातसमेत लिएकी उनलाई अपर्णा भनेर पनि चिनिन्थ्यो ।
त्यस गहन तपस्यापछि, उनले भगवान शिवलाई आफ्ना पतिका रुपमा पाइन् । यो व्रत श्रावण महिनामा माता पार्वतीले लिएकी थिइन् । त्यसकारण साउन महिना उनीहरूलाई विशेष मनपर्दछ । मानिन्छ कि साउनमा भोलेनाथको पूजा गर्दा उनी चाँडै खुशी हुन्छन् ।
साउन महिनाले शिवशंकरलाई शीतलता दिन्छ
भनिन्छ कि साउन महिना भोलेनाथलाई पनि मनपर्दछ, साउन महिनामा अधिकतम वर्षाको आशा गरिन्छ जसले भोलेनाथको तातो शरीरलाई शीतलता प्रदान गर्दछ । भगवान् शिवले नै साउन महिनाको महिमा सनतकुमारहरूलाई सुनाएका थिए ।
साउनको महिना कर्कटमा सूर्यको प्रवेशसँगै शुरू हुन्छ । सूर्य तातो हुन्छ र चन्द्रमाले शीतलता प्रदान गर्दछ, त्यसैले जब सूर्य कर्कटमा प्रवेश गर्दछ, मौसम शीतल हुन्छ र अत्यधिक वर्षा हुन्छ । भोलेनाथ बाबालाई साउनको महिनामा शीतलता हुन्छ र यसैले साउन महिना भगवान शंकरलाई अत्यन्त मनपर्दछ ।
शिवशम्भु यस महिनामा ससुराली गएका थिए
साउन महिनामा भगवान शिव पृथ्वीमा अवतरित भए र आफ्नो ससुरालको घरमा गए, त्यहाँ उनलाई अर्घ्य र जलाभिषेकले स्वागत गरियो । यो मान्यता छ कि भगवान शिव साउनमा हरेक वर्ष आफ्नो ससुरालको घर आउँछन् ।
भगवान शंकरको आशीर्वाद प्राप्त गर्नका निम्ति पृथ्वी लोकका मानिसहरुका लागि यो उत्तम समय हो । साउन महिनामा हरेक सोमबार व्रत बस्नाले भोले बाबासँग मागेका सबै इच्छा पूर्ण हुन्छन् भन्ने विश्वास रहँदै आएको छ ।
कसैलेपनि साँझमा भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी काम, बेवास्ता गरे धनको नाश
आज देशभर खिर खाएर साउन १५ मनाइँदै, यस्तो छ खिर खानुको महत्व
जतिसुकै राम्री भएपनि यस्ती स्त्रीसँग झुक्किएरपनि नगर्नुहोस् विहे
बिहीबार बिहानै उठेर गर्नुहोस् यी सामान्य धार्मिक काम, जीवनमा आउँनेछ बहार
आखिर अप्सराहरु को–को थिए, जान्नुहोस अप्सरा जस्तै हुन के–के हुनुपर्छ ?
घरमा सधैँ लक्ष्मीको बास चाहानेहरुले राख्नुहोस् यी मूर्ति र प्रतिमा
मन्दिर बनाउन जग खन्ने क्रममा जे भेटियो, देख्ने सबै चकित
कमाएपनि जमाउन सक्नुभएन, पर्स वा हातमा पैसा टिक्दैन ? -अपनाउनुस् यी उपायहरु
यी हुन् घरमा अशान्ति र धनको कमी हुने ८ कारण
हिन्दु धर्मको निन्दा गरेको भन्दै डा. बाबुराम भट्टराईको पुत्ला दहन
कतै तपाई कै त परेर यो चमत्कारीक राशी, जसको भूत वर्तमान र भविष्य नै उज्जवल
मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान् पर्व आज देशभर हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदै
इद उल अज्हाको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाको शुभकामना सन्देश
त्रिविले गर्यो नतिजा प्रकाशन–यसरी हेर्नुहोस्